बाहुबलीको ११ रोचक तथ्य, टिस्यु पेपरबाट बनेको १००० फीटको झरना | NepalDainik
बाहुबलीको ११ रोचक तथ्य, टिस्यु पेपरबाट बनेको १००० फीटको झरना
एजेन्सी ।भारतीय सिनेमामा सर्वाधिक सफल फिल्म ‘बाहुबली’ र ‘बाहुबली–२’को सेट, पात्र, हतियार तथा विभिन्न चीजको पछि रोचक प्रसंगहरु छन् । फिल्ममा यी सबै चीजलाई नयाँ तरिकाले प्रयोग गरिएको छ । जान्नुहोस् फिल्मसँग जोडिएका यस्तै केही नसुनिएका १२ कुरा ।
४.१५ सय सैनिक थिए, युद्धमा सवा लाख देखिए – पहिलो भागको ‘क्लाइमेक्स’ दृश्यमा माहिष्मतिका २३ हजार सैनिक दुश्मनका १ लाख सैनिकसँग लडिरहेको देखाइएको थियो । तर, एकै समयमा १५००भन्दा बढी सैनिकहरुलाई दृश्यांकन गर्न असम्भव थियो । बाँकीलाई थ्रि–डी प्रविधिबाट देखाएइको थियो ।
५.१०० ट्रक माटो राखेर बाहुबलीलाई मारियो – बाहुबलीलाई मार्ने दृश्यका लागि एक नांगो पहाड दृश्यमा देखाउँनु पर्ने थियो । त्यसका लागि तोकिएको ठाउँमा पानी परेर झार उम्रिएकाले रातारात १०० ट्रक माटो थुपारेर रोड बनाइयो । ६० फिट अग्लो नक्कली पहाड बनाइयो र त्यसमाथिबाट रातो रंग लगाइयो । राजस्थानबाट रुख मगाएर फाइबर ग्लासको मद्दतले ति रुखको नक्कल बनाइयो । बाहुबली मर्ने दृश्यको सेट तयार पार्न ४५ दिन–रात लागेको थियो ।
६.हेलिकप्टरको पखेटा बनाउँन प्रयोग गरिने पदार्थबाट बनाइयो हल्का हतियार – यस फिल्ममा देखिएका साँडे, घोडा, सर्पआदि सबै जनावर र साना–ठूला हतियार हेलिकप्टरको पखेटा बनाउँने कच्चा पदार्थ कार्बन फाइबरबाट बनाइएको हो ।
७.५ बर्षसम्म सुटिङका लागि ३ बजे उठ्नु पर्यो – फिल्मका सबै सदस्य पाँच बर्षसम्म बिहानको ३ बजे उठ्नु पर्थ्यो । बाहुबलीको दुवै पार्टको सुटिङ ६१५ दिन चलेको थियो । ३० स्टुडियोले फिल्ममा भिजुअल इफेक्टमाथि काम गरेका छन् । युक्रेन, सर्बिया, इरान र चीनको स्टुडियोमा यस फिल्मका लागि काम गरियो ।
८. २ मिनेटको दृश्यका लागि लाग्यो १०० दिन – अन्तिम लडाई दृश्यांकन गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौति थयो । जम्मा २ मिनेटको दृश्यका लागि करिब १०० मिनेट दिन लागेको थियो । त्यसका लागि प्रविधिको राम्रो प्रयोग गरिएको छ |
९.बाहुबलीको ९० प्रतिशत दृश्य नक्कली हुन् – दुवै भागको ९० प्रतिशत दृश्य नक्कली हुन् । कटप्पाले बाहुबलीलाई मारेको दृश्य समेत नक्कली थियो । फिल्ममा देखिएको पहाडदेखि जनावर सबै प्रविधिको प्रयोगबाट देखाइएको छ । २० देखि २५ फीटको दुरीबाट लिएको दृश्य मात्रै फिल्मको वास्तविक दृश्य हो ।
१०.४ भागमा बनाइयो भल्लाल देवको ४०० किलोको मूर्ति – माहिष्मति राज्यमा राखिएको भल्लालदेवको मूर्तिको वजन ४ सय किलो थियो । यसलाई ४०० व्यक्तिको समूहले बनाएको थियो । यसलाई ४ अलग–अलग भागमा तयार गरिएको थियो । जसमा करिब एक महिनाको समय लागेको थियो ।
११. बाहुबलीलाई मार्ने सोचिएको थिएन – बाहुबलीको सुरुवाती स्त्रिप्टमा कटप्पाद्धारा बाहुबलीलाई मोर्ने योजना थिएन । तर, जब फिल्मका समूहले ‘ड्रामा’ मिसाउँनुहो् भनेपछि यो दृश्यलाई फिल्मको अन्त्यमा जोडियो । यदि समूहले त्यसो नभएको भए सायद ‘कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मार्यो रु’ भन्ने प्रश्न भाइरल हुन्न थियो होला ।
No Comment to " बाहुबलीको ११ रोचक तथ्य, टिस्यु पेपरबाट बनेको १००० फीटको झरना "